USteven Wolfe (owazalwa ngoZibandlela 31, 1978), owaziwa njengoJohnny Sins, ungumlingisi wezocansi waseMelika, umqondisi, kanye no-YouTuber. Waziwa ngekhanda lakhe elishefiwe nomzimba wemisipha, uhlala njalo phakathi kokuseshwa kwezithombe zocansi ezithandwa kakhulu. Uthole izindondo eziningi ngomsebenzi wakhe, kufaka phakathi amagama amabili aqokelwe umklomelo we-AVN we-Male Performer of the Year.
USins njengamanje uhlala eLas Vegas. Phambilini wayeshade nomlingisi wezithombe zocansi u-Kissa Sins. Bahlukana ngo-2019, kodwa bahlala bengabangani abakhulu.
Ngo-Okthoba 2017, isithombe sakaSins sabhalwa ku-twitter ngumsebenzisi othi wayengekho ngemuva kwesigameko sokudutshulwa kweLas Vegas. I-tweet yayingenye yezinkohliso eziningi zegciwane ezavela ezihlobene nokudubula.
USinns wazalwa njengoSteven Wolfe ePittsburgh, ePennsylvania, ngoZibandlela 31, 1978. Uzichaze njengomuntu "onamahloni kakhulu" ngenkathi ekhula. Ngemuva kokuphothula izifundo zakhe ekolishi, wathola umsebenzi esebenza izinsuku eziyisithupha ngesonto kwezokwakha. Wazibona izimpawu zokuqala zempandla yamadoda ngenkathi eneminyaka engama-24 ubudala, futhi ugcine ikhanda lakhe ligundiwe kusukela lapho. Ngo-2006, eneminyaka engama-28, wayeka umsebenzi wathuthela eLos Angeles ukuze angenele umkhakha wamafilimu wezithombe zocansi.
Imizamo yokuqala yezithombe zocansi kaSinns yenziwa ngezikhangiso zeCraigslist.UBrazers umchaze njengomuntu "ohamba phambili" wesitudiyo, njengoba esenze ezigcawini ezingu-1,054 kusukela ngo-Ephreli 1, 2019. Wadlala kumavidiyo angaba ngu-2 300 emsebenzini wakhe wezocansi.
NgoJuni 10, 2015, i-Pornhub yethule umkhankaso wokubuyisa imali nge-Indiegogo ukukhiqiza ifilimu yabantu abadala yokuqala esikhaleni. Izono nomlingisikazi akanye naye u-Eva Lovia behlelwe ukuthi bazodlala kule filimu. Ukube iphrojekthi ibixhaswe ngempumelelo, laba bobabili bebengathola izinyanga eziyisithupha zokulungiselela okunzima ukwethulwa, kufaka phakathi amandla adonsela phansi, isivinini, nokuqeqeshwa kwezinga lokushisa. Ngesikhathi ebuzwa ngaleli thuba, iZono zathi, "Kungaphezu kokwenza imali kuphela, noma imali edutshuliwe yalolo daba. Kumayelana nokuqopha umlando." Lo mkhankaso uqoqe ama- $ 236,086 ezinsukwini ezingama-60, wehluleka ukufinyelela ezinhlosweni zawo ezingama- $ 3.4 million.
Ekuqaleni kuka-2017, Izono nomlingisi wezithombe zocansi u-Kissa Sins (owayengunkosikazi wakhe ngaleso sikhathi) wethula isiteshi sabo se-YouTube iSinsTV, esibhala ngempilo yabo yansuku zonke futhi enezeluleko ngocansi. Kusukela ngoMeyi 2021, lesi siteshi sesithole ababhalisile abayizigidi eziyi-1.73. Ividiyo yezono ezizama ukudla okulula okuhlukahlukene kwaseTurkey yaba yividiyo ephezulu ye-YouTube eTurkey.
NgoJulayi 2018, izithombe zezono ezihambisana nezinye izinkanyezi eziningana zazicwecwe ohlangothini lwebhasi elalizungeza iKerala eNdiya. Ngasekupheleni kwalowo nyaka, iZono zathola umklomelo woMdlali Owadume Kakhulu ngabesifazane emiklomelweni yaminyaka yonke ye-Pornhub, lapho abaphumelele babenqunywa yimininingwane yokusakaza yabasebenzisi.
Kusukela maphakathi no-2019, Izono seziyekile ukwenza ama-porn amavidiyo kodwa zathi angabuya ngokuzayo.
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Johnny_Sins&oldid=87932"
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-17 uNtulikazi 2021, nge-14:17.